Ento ho an'ny mpamorona goavam-pahaizana amin'ny solosaina tsy hita maso - AFRIKHEPRI
Ento amin'ny mpamorona goavam-pahaizana amin'ny solosaina tsy hita maso
ny tsiambaratelo esoterika momba ny geometry masina - Documentary (2010)
tuesday, 7 jolay 2020
Fifandraisana FAMPIANARANA SY FISORONANA MASINA
Yapi N'Cho Didier
Ny fahatahorana dia nahatonga an'i Yapi N'Cho Didier tamin'ny famoronana azy ho famantarana mafy ho an'i Afrika sy ho an'izao tontolo izao, Saingy indrisy, ity Ivoariana Bill Gates ity dia maty tamin'ny alina nanomboka ny alahady ka hatramin'ny Paska ny alatsinainy tamin'ny 2 ora ny marainan'ny 6 aprily 2015 any Abidjan.
'' The Myster Mouse 7 ',' The Dead Cryptor DVD ',' DCE (Dead Cryptor Email) ',' Mezo Web Cam ',' CN.lov '... fitaovana revolisiona novolavolain'i Yapi Didier, ivon-tsain'ireo Ivoariana amin'ny solosaina mety tsy hahita ny làlan'ireo cyber, birao na trano fonenan'ny mpankafy solosaina ao Ivory Coast.
YAPI DIDIER nanomboka ny asany hatramin'ny fahazazany. Ao amin'ny faritra "Gôh Djiboua" izay fantatra amin'ny hoe GAGNOA, dia faritra iray any atsimo andrefan'ny Repoblika Côte d'Ivoire izay misy ny baolina kitra iraisam-pirenena DIDIER DROGBA. Efa nanao fitaovana elektronika izy nanomboka tamin'ny sekoly ambaratonga fototra (radio, famantaranandro elektronika, calculator, kilalao ary gadget elektronika hafa). Tamin'ny 1992, nijaly izy ka nahatonga azy hanamboatra fitaovana elektronika hifehezana ny toerana hipetrahana mijoro, izay nahatonga fambara fampitandremana azo tsapain-tanana izany raha misy ny tsy fahampiana.
1998, YAPI Didier namorona voalohany solosaina mba bip anatrehan'ny olona mamantatra ny powering (ignition), dia ny Pentium MMX 200 Mhz ahitsy miorina amin'ny famatsiana ny interface tsara HERY fampidirana ny mitambatra ao anatin'ny trano . Endrika miavaka, vita amin'ny kitapo hazo miaraka amin'ny teknika iray izay nahatonga ny tsy fahitana ilay fiara diskette.
10 Febroary 2011, ny filoha amerikana BARACK OBAMA dia nanome voninahitra ny mpikaroka, nitondra tombam-bidy azo antoka ho an'ny fanamarihan'ny mpikaroka tamin'ny alàlan'ny mailaka ofisialy nataony. Fanomezam-boninahitra manan-tantara ho an'ny mpikaroka ankehitriny izay mamela azy handinika ny soatoavin'ny ordinaterany.
13 May 2014Nampahafantatra ny Zanany umpteenth Fanavaozana (Keyboard IK1 Noresahina ankehitriny manala ny fitendry solosaina lovia eo amin'ny latabatra ... ary izay manambara ny fahatongavan'ny IK2 sy IK3 ny fitendry tsy hita maso ny ordinatera ao amin'ny habakabaka 4 lafiny fijery sns lahatahiry IK1) eo anoloan'ny sehatra iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena manamarina fa misy tokoa ny mpahay siansa Afrikana.
Fihetseham-pandrosoana lava sy mahasosotra no manimba sy mampihena ny fahasalamany ...
Ny fitiavany ny IT sy ny fitiavany an'i Afrika sy ny fireneny Côte d'Ivoire dia nanery azy handroso bebe kokoa amin'ny fikarohana nataony. Ny zavatra noforonin'i Yapi Didier dia mihatra ihany koa amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny kolontsaina toa ny mahazatra an-trano, fa koa mihoatra ny sehatra ara-pitsaboana (sary an-tsaina).
Ny isa algorithm ny fitantanana ireo rafitra, ny 'Pentium MMX 200X', ny Afrikana 1er PC miaraka amin'ny hiringiriny ny ignition rafitra, namorona ny tanora Ivoariana natao 1998 amin'ny rafitra fanairana pyrotechnic tsy misy azo nitelina mandrakizay ...
Noho ny ezaka nataon'ny dokotera mpikaroka Ivoriana YAPI DIDIER dia afaka nanohitra ny fanaintainan'ny areti-maso roa.
Jean d 'Ormesson, amin'ny asany "Andro iray handeha aho tsy hiteny ny zava-drehetra", dia nilaza fa "tsiambaratelo ny tantara, zava-manaitra ary famoronana".
Yapi Didier, hitoetra mandrakizay ao amin'ny fahatsiarovana antsika isika ary avela tsy nilaza ny zava-drehetra na namorona ny zava-drehetra.
Akon Light Africa to Light 600 tapitrisa Afrikanina
Clément Shala namorona ny electro-brazier ho an'ny vehivavy Kongoley
Ary avy any Afrika ny foko roa ambin'ny folon'ny Isiraely (ISIS-RA-EL)?
SOAZARAO NY ARTIKO ARY ANY ZANAKAO
Kitiho eto ambany raha te hamoaka lahatsoratra
Foundation Afrikhepri de Ny fahazazan'ny tompo iray - Rakitra fanadihadiana (2018): "Ny dia tsy manam-paharoa natokana ho an'ny tompona ara-panahy amin'ny hoavy: boky fanadihadiana tsara hodiavina!" Jul 6, 01:32
Foundation Afrikhepri de Ny ady amin'ny voan'ny voa - fanadihadiana (2016): "Hanana sakafo GM ihany avy amin'ny zavamaniry transgenika ao anatin'ny 15 taona isika!" Jul 6, 01:27
Foundation Afrikhepri de Zahao ny mpanefy (2): "Tsara film mba hahita!" Jul 6, 01:21